Semalt: Zvikonzero Zvina Zvakaita Sei IT Services Makambani Anofanira Kuva neBlog
Kune makambani akawanda eT IT mapoka anofarira kubudirira munyika yebhizimisi,asi nokuda kwechimwe chikonzero, vashomanana bedzi vane bhulogi pawebsite dzavo. Vakawanda veIITmapoka emakambani anonamatira kumagetsi ekutengeserana kwetsika kana kuti anoona zvakaomauye nguva inopedza kushanda blog. Zvisinei, iyo makambani anoshandisa kambanibhuku rinozopedzisira rikohwa mibairo yekuita saizvozvo. Julia Vashneva, kubudirira kwekambaniMutungamiri we Semalt Digital Services, anotsanangura zvipi zvinobatsira zvinoitika pablogi zvinounza kumakambani eT IT.
Kujekesa Kusiyana Kwezvivako
Kugutsikana kwekutengesa chikamu chinokosha chekushanda kwebhizimisi munyika yose.Mabhizinesi mazhinji ari kuenda digital nekufambisa, saka zvinyorwa zvinowanikwazvinodiwa kuti mutungamiri wechizvarwa uye kusiyana - best tvs in india. Panguva imwecheteyo, kusiyanainogona kunge iri dambudziko kune makambani akawanda eT SERV services, sezvavanotarisana nemabhizimisi mamwechete zuva nezuva. Paunenge uumba blog, uri kusika chimwe chinhu chakasiyana,chimwe chinhu chinokuita iwe kusimuka kubva kuvanhu vazhinji. Kushandisa, unogona kuratidza unhu hwako,maitiro ako emabasa, kambani yekambani yako, nezvimwewo, izvo zvichabatsira vanotarisira vatengi kusarudza kambani yenyu pakati pevamwe.
Makambani mazhinji eTI emakambani anowanzobatanidza mumwe nomumwe sezvo achishandisa izwi rimwe chete.Saka vanogona sei kuva nechokwadi chokuti bhizimisi renyu iri nani pane imwe kambani? Uye seivanogona kutarisira vatengi vanoona kuti boka rako rakakwanisa zvakakwana kuwana basayaitwa? Makambani mazhinji eT SERVICES Makambani anowanzovimba neshoko remuromo kana kutonhora kudanamisangano, asi blog inofungidzirwa zvakanaka inogona kuvhura zvakasiyana zvachose,nzira yakaoma yekuwana vatengi vatsva.
Kuratidza Zviitiko uye Unyanzvi
Peji ye 'About Us' yewebsite yekambani inonyanya kukosha paunokwezvavatengi vatsva. Kana iwe uchiti mutungamiri wako kana mutungamiri ane makore mazhinjiruzivo, zvakangofanana neyeimwe sangano, zviri pachena, zvicharatidzika sechinhu chinonyangadza.Nekubatsirwa kweblogi, pane zvinopesana, unogona kuratidza unhu hwakouye unyanzvi hwokutungamirira, kuitira kuti zvikumbire kune avo vanotarisira vatengi. Izvo zvishomaZviri nyore kuita, asi mifananidzo yakadaro yebhuku inoratidza chinangwa chezvose zvaunoda kukurudzira.
Kukurudzira Bhizimisi Rako
Bhuku rino richava hurukuro yakanaka yekuunza hutano hweTI pamwe chete.Kana uchangobva kunyora pablogi rekambani yako, uri kutanga hurukuro, izvoyakasununguka kune vose vashandi vebazi uye vatengi. Mhinduro yaunogamuchiraichakubatsira iwe kukurudzira mabasa ako kuvanhu vakasiyana. Kana iwe ukawana kodzerozvinyorwa pa blog yako, ichaisa kambani yako pamepu.
Kubudisa Zvitsva Zvinotungamirira
Ongororo dzichangobva kuitika dzinoratidza kuti makambani eB2B anoshandisa bhurocha achabereka kusvika ku 67% mamweinotungamirira kune makambani asina mari, uye makambani eB2C ane chiyero ichimuna 88% maererano. Paunenge uchigadzira nzira yako yakawanda yekudhinda,blog yako inofanira kugara ichikosha. Ichokwadi, achishandisa Search EngineOptimization (SEO) maitiro mumagwaro emabhulogi anobatsira makambani kuti ave nanirankings. Pasina huwandu hwakawanda hwehutano hwakabatana, hahuzobvirakuti zvibudirire. Paunoshandura bhulogi yako kuitira zvinangwa zve SEO, iwe unowedzerakukwezva kukosha kwevangangodhura vatengi.
Kutanga nekumhanya blog kunoda kushanda kwakasimba kweumwe munhu akagadziriranokuda kwekushanda zvakaoma, kutsvakurudza uye kune chido chehurukuro. Zvisinei, IT servicesmakambani anofanirwa kuve anoziva nezveanotarisira kuti inogona kuva nebhizimisi.Vatengi ve Semalt Digital Agency vakabudirira kuratidza kuti kudzoka kwekutsvaga kwekutsvaga mukutonga blog kwakakosha.